ỤMỤ AKWỤLA AMỤTAWO ỤZỌ ISI GBALAHỤ NDỊ OGBU ỌCHỤ – hoo!haa!!
Igwe Ọcha: Maka ndị ọjọọ, ndị ogbu ọchụ na-atọgbuzi ụmụ nwanyị ha butere n’ụlọ nkwari akụ nke na-ewuzi ugbua n’akụkụ Igwe ọcha (Pọt Haakọt), ụmụ akwụla nọ n’obodo ahụ echepụtala atụmatụ dị iche iche, iji zọọ onwe ha ndụ ma na-arụkwa ọrụ ha bụ ịzọpụta ụmụ nwoke ndị o ji na njọ.
N’ihi na ugwu mụta mgbaji ugwu, agadi nwanyị amụta arịkata ezuru ike, ụmụ agbọghọ ndị a keziri nkwụcha.
Ndị Uwe Ojii na Rivas Steeti anwụchikọwo ụmụ nwoke abụọ so akpa arụ a mana o nweghị onye ma ole ha dị.
Otu n’ime ndị ogbu ọchụ a, Gracious David West kọwara na ọ bụ ajọ mmụọ dubara ya n’arụrụala ahụ.
O pekata mpe ụmụ nwanyị iri n’otu ka ndị a tọgburu n’ụlọ nkwari akụ ka ha kwachara iko.
Ndị akwụla onye nta akụkọ anyị gbara ajụjụ ọnụ n’Igwe ọcha kwuru hoo!haa! na ụjọ jizi ha, na o nwere otu ọ dị na “amaghị ihe a tara ara, a takwoo eze”.
Kaosiladi, ha kpebiziri na ha agaghịkwa na-eso nwoke ala n’ụlọ nkwari akụ ebe ọ nọ, kama ha ga-eji aka ha kwuo ebe ọ ga-ebu ha gaa.
Otu n’ime ha, Gift, onye dị ihe dịka iri afọ abụọ n’anọ kwuru sị, “Nwoke ọbụla chọrọ ka anyị nọrịa ga-eso m gaa n’ụlọ nkwari akụ nke m kpebiri. Ọ bụghị ya, o buru ozu onwe ya gawa ka m were ndụ m mere ihe”
Ogbo ya ọzọ nọ na mpaghara GRA kwukwara na ụjọ anaghịzị ekwe ya pụta “n’ihu ọrụ”. Kaosiladi, ọ sịrị na agụụ na-eme ihe ọ ka ji apụta oge ụfọdụ
Mazi Eugene Nwauzi, Onyeisi oche otu ndị nwere ụlọ nkwari akụ, Hotel Owners Association, ngalaba Rivas Steeti kwuru na ndị otu ha na-agba mbọ eleghị anya n’azụ iji kwụsị ya bụ àgwà ọjọọ nke na-emebiri ha ahịa.
“Ọtụtụ ndị otu anyị etinyewo onyonyoo nchekwa bụ CCTV na gburugburu ụlọ nkwari akụ ha”
Nwauzi nyekwara ụmụ agbọghọ ndụmọdụ ka ha “mụrụ anya ka azụ” ma kee nkwụcha oge ọbụla ha na nwoke ha amabụghị mbụ yị.
Ọnụ na-ekwuru ndị Uwe Ojii na steeti ahụ, DSP Nnamdi Omoni kwuru na-achọpụtabeghi ebumnobi ndị a na-atọgbu ndị ha na ha dinara.
Ọ sịrị na eziokwu nwere ike ịdị na kepu kepu a na-ekwusa na ndị ahụ bụ ndị ọgwụ ego, ọ kacha ebe ekeresimesi ruworo nso.
Omoni kwukwara na ndị Uwe Ojii zọpụtara otu nwa agbọghọ mmadụ chọrọ ịtọgbu ụbọchị Wenezdee gara aga na Mile 4, Pọt Haakọt.
Nwa agbọghọ ahụ tiwere mkpu ka ekperime ahụ jiri nche isi(pillow) chọrọ ịpịgbu ya ka ọ nọ n’ụra.
Mkpu o tiwere mere ndị mmadụ jiri gbata were gbakaa ụzọ ma kpọzịa ndị Uwe Ojii ndị bịara kpụrụ nwoke ahụ.
Kaosiladi, ndị Uwe Ojii, ndị na-ekwukwa na ọ bụ ụmụ nwanyị asatọ ka a tọgburu, e mechiela ụlọ nkwari akụ abụọ ebe e nwetara ozu ụmụ agbọghọ abụọ.
Previous Post: NDIGBO BU IME UDO NA NAỊJIRIYA N’ISI – IBB
Next Post: AJA(SAND/SACRIFICE/PRAISE), OKWUTE